अस्पतालमा विरामी छोडेर डाक्टर‘साव’हरु हाजिर ठोकेर जुलुस लगाउन माइतिघर मण्डलामा – YesKathmandu.com
आइतबार ०५, फागुन २०७५
अस्पतालमा विरामी छोडेर डाक्टर‘साव’हरु हाजिर ठोकेर जुलुस लगाउन माइतिघर मण्डलामा
काठमाडौ‌ं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरु अस्पतालमा विरामी छोडेर आन्दोलन गर्न माइतिघर मण्डला पुगेका छन् । आकस्मिक बाहेकका सवै सेवा ठप्प पार्दै चिकित्सकहरु माइतिघर मण्डेला पुगेका हुन् । विरामीलाई छोडेर प्रर्दशनमा उत्रेका चिकित्सकहरुले भने विहान १० बजे अस्पताल पुगि हाजिर गरिसकेका छन् । आन्दोलनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक र इन्टर्न डाक्टरहरु रहेका छन् । उनीहरुलाई समर्थन गर्न नेपाली कांग्रेस र विवेशिल साझा पार्टीका कार्यकर्ता माइतिघर पुगेका छन् ।
१४ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनरत डा केसीको माग सुनुवाइ गर्न सरकारले चासो नदिए भन्दै उनीहरुले सरकारको कडा आलोचना समेत गरेका छन् । केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील नभएको जनाउँदै आफुहरुले आकस्मिक बाहेकका सवै सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । ‘आकस्मिक बाहेक सवै सेवा हामीले बन्द गरेका छौ’ आवासीय चिकित्सकहरुको संस्था नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले भने ‘जवसम्म डा. केसीका माग पुरा हुँदैनन् तवसम्म हामी आन्दोलित भइरहन्छौ ।’
गुट–उपगुटका कारण कांग्रेस कमजोर भएको भयाे: महामन्त्री कोइराला
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कसरी शेयर धनीलाई झुक्याउँछन् ? के हाे भित्रि काराेबार ?
निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्नु मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक संकेत हाे: डा. महत
सरकारकाे काम देखेर केहीलाई छट्पटी चलेको छ : मन्त्री अर्याल
बाराका प्रजिअ सवार गाडी दुर्घटना प्रकरण रहस्यमय बन्दै, परिवारले दिए किटानी जाहेरी